Khabar Chitwan || महानगर हाम्रो एजेण्डा हो ः दाहाल
महानगर हाम्रो एजेण्डा हो ः दाहाल
रेणु दाहाल पहिलो संविधानसभामा समानुपातिक सांसद् थिइन् । माओवादी जनयुद्धमा भूमिगत राजनीतिमा होमिएकी रेणु अखिल भारत नेपाली समाजको अध्यक्ष, माओवादी रोल्पाको सेक्रेटरी, सहईञ्चार्ज बनेर नेतृत्व पूरा गरिसकेकी छन् । पार्टीको काठमाडौं सचिवसमेत बनेर सफल नेतृत्व पूरा गरिसकेकी उनी शान्ति प्रक्रियापछि काठमाडौं केन्द्रित पार्टीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छन् । हाल उनी माओवादी केन्द्रको पोलिटव्युरो सदस्य छिन् । राजनीतिमा पार्टीको जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व सम्हाल्दै उनी पार्टी संगठनको नेतृत्वदायी भूमिकामा उकालो लाग्ने क्रममा छिन् । अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीको केन्द्रीय महासचिवसमेत रहेकी उनले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेद्वारी दिएकी छन् । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ की छोरी दाहालसँग कायाकैरन दैनिकका विप्लव काफ्लेले गरेको संक्षिप्त कुराकानी ः
भरतपुर महानगरपालिकामा तपाईंको उम्मेद्वारी किन ?
भरतपुर महानगरमा म जन्मेहुर्केको ठाउँ हो । जनयुद्धको अवधिमा भूमिगत जीवनले मलाई धेरै कुरा सिक्न र नेतृत्व लिनसक्ने बनाएको छ । म महानगरलाई विदेशका विकसित महानगरजस्तो बनाउने गरी नेतृत्वमा आउन चाहन्थें । स्थानीय तहको चुनावमा मेरो चाहना मात्रै होइन, पार्टीले आवश्यक ठानेर मलाई महानगरमा मेयर पदमा उठाएको हो । सुरुको अवस्थामा रहेको महानगरलाई देशकै उत्कृष्ट महानगर बनाउन चाहन्छु ।
महानगरमा धेरै सम्भावना छन् । धेरै काम गर्नुछ । मेट्रो ट्रेन सञ्चालन भएको महानगर बनाउन चाहन्छु । सबै सडक कालोपत्रे, सडक सञ्जाल नपुगेका ठाउँमा सडक विस्तार गर्ने काममा लाग्नेछु । व्यवस्थित अस्पतालहरुको शहर बनाउने योजना ल्याउँदैछु । जस्तोसुकै रोगको उपचार भरतपुरमा सम्भव हुने गरी स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने सोच छ । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयलाई कृषि अनुसन्धान केन्द्र बनाउन लागिपर्नेछु । पब्लिक क्याम्पसको समन्वयमा पब्लिक युनिभर्सिटी निर्माण गर्न केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्नेछु । भ्रष्टाचार, अनियमितता शून्य शहनशीलतासहितको सुशासन प्रदान गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छु । बरण्डाभार जंगल किनार, राप्ती नदी किनार हुँदै गोलाघाटबाट नारायणी नदी किनार हुँदै भरतपुर महानगरपालिकालाई घेरेर स्तरीय रिङरोड बनाउने र सो रिङरोडले सबै वडालाई छुने गरी सडक सञ्जाल पु¥याउन लाग्नेछु । त्यसैगरी सुकुम्बासी समस्या समाधान मेरो उच्च प्राथमिकताको विषय हो । भरतपुरलाई सुकुम्बासीमुक्त महानगर बनाउनेछु । जमिन बाँझो राख्नेलाई अतिरिक्त कर लगाएर नियमलाई कडाइ गर्नेछु । सिंचाई सुविधा विस्तार गरेर कृषि उत्पादनमा जोड दिइनेछ । निजी क्षेत्रको समन्वयमा प्रत्येक वडामा फनपार्क, मनोरञ्जनस्थल, वृद्धाश्रम, अनाथालय निर्माण हुनेछन् । छिट्टै आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रसमेत सार्वजनिक गर्दैछु ।
महानगरभित्रको पर्यटन विस्तारका योजना के छन् ?
पवित्र धार्मिकस्थल देवघाटलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको धार्मिक केन्द्र बनाउने योजना बनाइनेछ । देवघाटदेखि गोलाघाटसम्म स्टीमर र साना फेरिहरुमार्फत जलयात्राको व्यवस्था मिलाइनेछ । नारायणी नदी किनारको उचित तटबन्धन गरेर हरित बेल्टसहितको मनमोहक पार्क बनाइनेछ । प्रत्येक वडामा होमस्टे निर्माण गरिनेछन् । हरित महानगरपालिका बनाउन ‘एक घर, दुई रुख’को अवधारणा कार्यान्वयन गराइनेछ । जंगल किनारमा हरित मनमहोक बगैंचा निर्माण र तारबारको व्यवस्थासमेत मिलाइनेछ । कविलासमा केवुलकारसहितको भ्युटार बनाइनेछ । पदमार्ग बनाई पर्यटकको गन्तव्य बनाउन लागिपर्नेछु । महानगरसँग जोडिएका निकुञ्ज क्षेत्र, गोलाघाटदेखि कविलाससम्म पर्यटनको सम्बन्ध जोड्ने खाका निर्माण गरिनेछ ।
माओवादी केन्द्रले लिएको नीति तथा एजेण्डा नै यतिबेला कार्यान्वयनको अवस्थामा छन् । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिकजस्ता कुरा माओवादी आन्दोलनका उपज हुन् । पहिलो संविधानसभाको चुनावमा माओवादीले चुनाव जितेको क्षेत्र पनि हो । महानगरमा पार्टी संगठन बलियो छ । महानगरपालिका बनाउन माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ । महिला नेतृत्व भूमिगत जीवनबाट राजनीतिमा आएको छु । सांसद् भएर पनि महानगरको नेतृत्व लिन मैले दिएको उम्मेद्वारीलाई जनताले समर्थन गरेका छन् । जनता, नेता, कार्यकर्ताको एकता नै जितको आधार हो ।
टिकट पाउन बा, आमा राजनीतिमा हुनुपर्छ भन्ने छैन । मै आफै राजनीतिमा लागेकी छु । बुबा राजनीतिमा हुँदैमा मैले आफ्नो राजनीतिक यात्रा किन रोक्ने ? म प्रदेशको नेता बन्न सक्ने प्रशस्तै सम्भावना थिए । तर, पार्टीले मलाई भरतपुर महानगरको मेयरमा पठायो । आफू जन्मे, हुर्केको ठाउँको जनप्रतिनिधि भएर जनताको सेवा गर्न मैले किन नपाउने ? म चुनाव जितेपनि, हारेपनि चितवनको विकासमा प्रतिबद्ध भएर लाग्नेछु ।
महानगरमा कांग्रेस–माओवादीको तालमेलको हल्ला छ नि !
योबारे मलाई जानकारी छैन । हामी ठूलो दलमध्ये एक हौं, चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाँदा तालमेलमा ध्यान दिएका छैनौं । भरतपुरको सवालमा त्यो ढंगले कुनै छलफल भएको छैन । हामी एक्लै लड्ने, जित्ने मानसकिता लिएर अघि लागेका छौं । चुनावलाई मैले स्वाभाविकरुपमा लिएको छु । अस्वाभाविक लागेको छैन ।